'चिसो मान्छे' सँग स्वस्तिमा खड्काको यात्रा अनुभव (भिडिओ) :: रविन न्यौपाने :: Setopati
'चिसो मान्छे' सँग स्वस्तिमा खड्काको यात्रा अनुभव (भिडिओ)
स्वस्तिमा खड्काले नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्न थालेको करिब ६ वर्ष भयो।
छोटो समयमै उनले ९ वटा फिल्ममा अभिनय गरिसकिन्। 'होस्टल रिटर्न्स', 'छक्का पन्जा', 'बुलबुल', 'जय भोले' जस्ता फिल्ममा अभिनय गरेकी उनले नृत्य गरेको 'कुटुमा कुटु' र 'साली मन पर्‍यो' जस्ता गीत युट्युबमा हिट छन्।
तर उनी आफूले निर्वाह गरेका भूमिका र चरित्रमा सन्तुष्ट छैनन्। नेपाली निर्माताहरूले महिला पात्रको उठानमा धेरै मेहनत गर्न नचाहेको स्वस्तिमाको बुझाइ छ।
'हामीलाई नेचुरल म्यानरिजम क्यारी गर्न दिइँदैन,' स्वस्तिमा भन्छिन्, 'बोल्दाखेरि पनि पर्फेक्ट हुनुपर्छ। हात हल्लिँदा पनि पर्फेक्सन खोजिन्छ। कसैको आँखा झिम्क्याउने बानी हुन्छ। कसैको मुख हल्लाउने बानी हुन्छ। हरेक कुरा व्यक्तिको त्यो सुन्दरता हो। तर ती कुरा अभिनेत्रीलाई गर्न दिइँदैन।'
धेरैपटक आफूले पुरुष पात्रका लागि देखिएको उत्साह महिला पात्रका लागि नदेखिएको स्वस्तिमाको दाबी छ।
'भष्मे डनले पशुपति प्रसादमा जुन स्वर निकालेको छ, त्यसले गर्दा त्यो चरित्रले फरक व्यक्तित्व बनाएको छ। हाकु कालेले त्यस्तै गरेको छ,' स्वस्तिमाले भनिन्, 'मेरो आउँदै गरेको चलचित्र चिसो मान्छेको पात्रले पनि आँखा झिमझिम गर्छ। धेरै चलचित्रमा अफर आउँदा म पात्रको म्यानरिजम फरक बनाउन कुरा गर्छु। तर उहाँहरू मान्नु हुन्न। महिला पात्रलाई एकदमै पर्फेक्ट खोजिन्छ। फिल्म निर्मातालाई मेरो पात्र के हुन्छ भनेर सोध्यो भने महिला पात्रलाई लिएर उहाँहरूमा उत्साह देखिँदैन। उहाँहरूको जवाफ हुन्छ- तिमी जस्तो प्रकारको हो त्यस्तो हो भन्नुहुन्छ।'
स्वस्तिमाले बुलबुल फिल्ममा गरेको टेम्पो चालकको भूमिकाको प्रशंसा भएको थियो। अभिनेत्रीका रूपमा भिन्न र फरक पात्रको भूमिका निर्वाह गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि निर्मातामा महिला पात्रको आवरण र स्वभाव पर्फेक्ट हुनुपर्ने मानसिकता रहेको अनुभव स्वस्तिमा बताउँछिन्।
फिल्म चिसो मान्छेमा स्वस्तिमा सुदूरपश्चिमकी महिलाको भूमिकामा देखिएकी छिन्। उनको पात्रले पटकपटक आँखा झिमझिम गर्छ। तर यो स्वभाव आफूले निर्देशकलाई नभनी प्रयोग गरेको स्वस्तिमाले बताइन्।
'फिल्म सुटिङ भएको केही दिनपछि कलाकार र सम्पूर्ण टिमबीचको छलफलमा निर्देशकले आँखा झिमझिम राम्रो देखिएको बताउनुभयो,' स्वस्तिमाले भनिन्, 'त्यसलाई निरन्तरता दिन निर्देशकले भनेपछि म निक्कै खुसी भएँ।'
चिसो मान्छेका लागि आफूले डकुमेन्ट्री हेर्नेदेखि लिएर भाषा र लवजका लागि कक्षा लिएको स्वस्तिमाको भनाइ छ। फिल्म सुटिङअघि बाजुरा पुगेर पात्रको कपडादेखि कपालको क्लिपसम्म कस्तो लगाउने भन्ने उनले टुंगो लगाएकी थिइन्।
स्वस्तिमाले फिल्ममा वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएको श्रीमानको लास लिन आएकी सुदूरपश्चिमकी एक महिला, उनका ससुरा तथा शव बोकेर जाने चालकको यात्रा कथा समेटिएको छ। फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक भएदेखि उनको पात्रको चर्चा भइरहेको छ।
हेर्नुहोस् स्वस्तिमासँगको भिडिओ कुराकानीः
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २५, २०७९, ०६:१३:००
अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बन्ने समितिका लागि सभामुखले मागे सदस्यको नाम
नेताहरूलाई प्रश्न- के सन्तानले तपाईंहरूका कुरा पत्याउँछन्?
‘सबैलाई चासो छ, अब जुँगेले के गर्छ?’ (भिडिओ)
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा थपिएको सास्ती (भिडिओ)
'हिउँ चितुवा' हजुरबुवाको पाइला पछ्याउँदै सगरमाथा चढेका तेन्जिङ (भिडिओ)
काठमाडौंमा तन्नेरी पुस्ताका बालेन र सुनिताको नेतृत्वबारे के भन्छन् युवाहरू? (भिडिओ)
बालेन शाहको र्‍यापरदेखि मेयरसम्मको यात्रा (भिडिओ)
सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयबारे के भन्छन् सर्वसाधारण? (भिडिओ)